“Manana ny fahalalana ifotony nampianarin’ny ray aman-drenibe anay izahay.” · Global Voices teny Malagasy
“Manana ny fahalalana ifotony nampianarin'ny ray aman-drenibe anay izahay.”
Voadika ny 05 Jona 2018 5:03 GMT
Gildardo Juarez Vega dia mpikambana ao amin'ny SURCO AC, fikambanana mpikatroka ifotony izay miompana manokana amin'ny fampahalalam-baovaon'ny vondrom-piarahamonina. Avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Ayuuk ao Coatlán ao amin'ny fanjakana Oaxaca, Meksika izy, ary koa avy amin'ny kolontsaina Ayuuk Jaay (fantatra koa hoe Mixes). Ity manaraka ity dia dika tamin'ny fandraketam-peo fanadihadian'i Gildardo momba ny zavon-teny manondro ny voambolana “indígena” (tompotany).
Ireo voambolana manjaka avy amin'ny lahatsoratra 26189 nivoaka tanelanelan'ny Mey 2017 ka hatramin'ny Mey 2018 hita nanonona “indígena” (tompotany) tao anatin'ny angona Media Cloud roa amin'ny sehatra fampitam-baovao miteny Espaniola ao Meksika. (Mijery sary lehibe kokoa)
Amin'ny zavon-teny, voalaza fa Vahoaka, fokonolona, ​​na ampahan'ny firenena mihitsy aza izahay?, voalaza fa manana fiteny izahay ary noho izany, manan-jo izahay. Voalaza ihany koa fa miaina amin'ny fandaharanasa ara-tsosialy izahay, ary indrindra indrindra, voaresaka be amin'ny doka ataon'ny governemanta izahay. Heveriko fa mba hanamarinana ny loharano ara-toekarena izany. Voahodikodina ve ny famatsiam-bola azo?
Lazaina fa Marichuy (María de Jesús Patricio Martínez) izahay, izahay no mpitondra tenin'ny CNI (Kongresim-pirenen'ny Tompotany), izahay no kandidà (ho filoham-pirenena).
Niaina ny vahoakanay ary tafavoaka velona noho ny fahalalana eo an-toerana mikasika ny famafazana, ny fijinjana, ny fahasalamana, ny fanorenana, ny fikarakarana ny tontolo iainana, sns. Ary indrindra indrindra, manana fifandraisana amin'ny fifanajana amin'ny natiora izahay. Manana fimaroana, mavitrika ary misy mifanohitra ny fomba fiainanay sy ny fikambanana amin'ny maha-vahoaka anay.
Tsy hita ao amin'ny zavon-teny ireo vondrom-piarahamonina tompotany izay nitazona sy niteraka fahalalana. Manana fahalalana eo an-toerana izay nampianarin'ny raibe sy renibe izahay. Ny vahoaka tompotany tsirairay dia manana ny tantarany, ny angano, ny mpamorona angano, ary ny fizotran'ny fiarahamonina sy ny tolona.
Ny tantara tianay holazaina dia hoe Ayuuk ja'ay izahay, satria manana tantara, fiteny, ara-panahy ary fahalalana iombonana. Izaho dia ayuuk ja'ay, saingy tsy mahatsapa ho mahazo aina aho raha sady lazaina ho tsy Mixe no tsy tompotany.
Ity dia ao anatin'ny andiana Rising Frames norafetina tao anatin'ny hetsika nokarakarain'ny SURCO A.C. ao Oaxaca, Meksika. Nanampy tamin'ny fikarakarana atrikasa natao ny 29-30 May 2018 tao Oaxava, Meksika izy ireo izay nitondra miaraka ny solontenan'ny fikambanana sy vondrom-piarahamonina isan-karazany, indrindra avy amin'ny onjam-peon'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanadihady ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny fomba hisehoan'izy ireo amin'ny angona media Meksikana sy hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.